DHAGEYSO:Madaxweynaha dalka oo iska fogeeyay dhaliil dhanka hoggaanka ah | Star FM
Home Wararka Kenya DHAGEYSO:Madaxweynaha dalka oo iska fogeeyay dhaliil dhanka hoggaanka ah
DHAGEYSO:Madaxweynaha dalka oo iska fogeeyay dhaliil dhanka hoggaanka ah
Madaxweynaha dalka Mr. Uhuru Kenyatta ayaa gaashaanka u darruuray dhaliil uga timid qaar ka mid ah siyaasiyiinta wadanka oo ku eedeyay inuunan sida habboon ugu guulaysan hoggaaminta Kenya.
Mr. Kenyatta ayaa hoosta ka xarriiqay inuu weli yahay mas’uulka haya talada dalka.
Waxaa uu carrabka ku adkeeyay inuusan dhammaan muddo xileedka maamulkiisa sidaas awgeedna cid kasta oo u hanqal taagaysa hoggaanka wadanka sanadka 2022-ka laga doonayo in sida uu hadalka u dhigay ay fursad u siiso u adeegidda dadweynaha.
Mr. Kenyatta ayaa sheegay inay jiraan shakhsiyaad iska dhaadhiciyay inuusan tallaabo ka qaadi karin maadaama uu hoggaanka wareejin doono wax ka yar 2 sano ka dib.
Hoggaamiyaha dalka ayay in badan oo ka mid ah siyaasiyiinta wadanka ku dhaliileen inuusan tallaabo ka qaadin ku xigeenkiisa William Ruto oo ay ku eedeynayaan inuu xilli hore guda galay olole siyaasadeed.
Previous articleDHAGEYSO:Maamulka gobolka Banaadir oo joojiyay dhaqdhaqaaqyada dhulalka la xiriira
Next articleDHAGEYSO:Qoyska Carruur ku dhimatay Beledxaawo oo warbaahinta la hadlay